Madaxweynaha Galmudug oo ka soo horjeestay Xukuumada Cusub ee DKMG – SBC
Madaxweynaha Galmudug oo ka soo horjeestay Xukuumada Cusub ee DKMG
Posted by editor on Julaay 21, 2011 Comments
Madaxweynaha Maamul goboleedka Galmudug Maxamed Axmed Caalin ayaa mar uu la hadlayay SBC International caawa waxa uu ka soo horjeestay golaha wasiirada cusub ee uu maalin nimadii shalay gelinkeedii dambe uu soo magacaabay Raiisul wasaaraha dowlada KMG ah ee Soomaaliya C/weli Maxamed Cali Gaas.
Waxa uu sheegay Madaxweyne Caalin in ay tahay waxa ay uga soo horjeesteen xukuumada cusub arimaha latashiga Maamul goboleedyada oo ahaa heshiis horay loo gaaray oo uu wasiirka Koobaad ee DKMG ah ka leexday.
“waxaan u diidanahay oo keliya Qaabka la maray oo ah in laga leexday wada tashigii lala yeelan lahaa Maamul goboleedyada dalka ka jira” ayuu yiri madaxweyne caalin, waxuuna cadeeyay in aan wax wada tashi ah lagala soo yeelan 18ka wasiir ee la soo magacaabay.
Madaxweyne Caalin ayaa intaasi raaciyay in aanay waxba ka ogeyn wasiirada la magacaabay waxna aysan kulaheyn, arinta uu ay ku dhaqaaqeyn madaxda sar sare ee DKMG ahna ay tahay wax loo bareeray laguna talagalay .
Sikastaba ha ahaatee waxa uu tilmaamay Madaxweynaha Galmudug in loo baahanyahay in la sameeyo wada tashi iyo Wax wadaqasi badan, maadaama waxa la dhisaayo ay tahay xukuumad umada Soomaaliyeed ka wada dhaxeysa, hadiise ay suurta gali weydo in la wada tashto oo laga talaabsado wax wada qabsigii ay halkeedii ka sii soconeyso khilaafyada .